Kongo: Eny An-Tànanao (Sy Anaty Findainao) Ny Coltan-n’ny Fifandonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2017 8:17 GMT
Ny coltan (colombite-tantalite) dia akora mineraly ampiasaina hanamboarana ireny “condensateurs” sy “resistances” any anaty telefona findaintsika, ireny fitaovana filalaovantsika sy ireny fitaovana ao an-tokantrano ireny. Matetika izy io no ampitahaina amin'ny diamondra mamatsy ny ady sy fifandonana ao Afrika, ny fitrandrahana azy, tsy hoe fotsiny niteraka faharavana tsy hita noanoa ho an'ny tontolo iainana, sy fanitsakitsahana zon'olombelona amin'ny fomba mampivarahontsana, fa ny olona sasany aza mandroso ny hoe mamatsy koa ny fifandonana mitampiadiana ao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo izy io.
Ho fanombohana, ny tranonkala ConflictVoice dia manoro hevitra antsika hijery ny Blood Coltan, fanadihadiana iray (amin'ny teny frantsay) maharitra 52 minitra novokarin'i Patrick Forestier. Io sarimihetsika io dia nivoaka tamin'ny 2007, ary mamboraka ireo endrika miafina sy ny efa fantatra momba ny tsenan'ny Coltan, ny fampidirana resaka miaramila [amin'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany] sy ny fomba fiainana andavanandron'ireo Kongoley, izay iharan'ny fakàna io akora mineraly io. Ireo toerana fitrandrahana mampiasa fombandrazana no matetika loharanom-pivelomana ho an'ireo vohitra any amin'ny faritra lavitra. Tsy misy fantatr'ireo mpiasa mitrandraka azy ny momba izay ampiasàna azy io any amparany any.
Tamin'ny 2006, natolotray teto ny fanadihadiana iray hafa, Coltan mihoson-drà ao Kongo, novokarin'ny Foibe Pulitzer mpanao fanadihadiana momba ireo fifandirana, natokana ho an'ny resaka coltan sy ny olana ao Kongo RDC.:
Global Post, etsy andaniny, dia namoaka tany amin'ny faramparan'ny 2009 ny tatitra an-tsary manahiran-tsaina narahana tafa iray nifanaovana taminà kongoley iray mpitrandraka coltan, izay ny tantarany dia mety ho tantaran'ny iray hafa mpitrandraka coltan ihany koa.
Tristan McConnell, ao anatin'ny lahatsorany ho an'ny Global Post “Ireo akora mineraly ampiasaina any anaty telefona finday no mamatsy ny fifandonana miteraka faty olona ao Kongo”, dia mampahatsiahy antsika ny antony tsy maintsy iheverantsika ny tenantsika ho tafiditra amin'io fifandonana io:
Jonathan Gosier, nahazo famatsiamboka tamin'ny TED, no manoritsoritra ao amin'ny Appfrica ireo fanadihadiana nampitahàna ny torohay napetraka an-tsarintany tamin'ny alàlan'ny Ushaidi, fitaovana fanarahana maso ny fifandirana, sy ny sarintanin'ireo faritra izay misy fitrandrahana coltan, tamin'ny fanipihana fa misy zavatra mifanindry tsy azo lavina ireo sarintany roa ireo.
Anatin'ny sary etsy ambony, ireo faritra mena dia maneho ny herisetra hita avy ao amin'ny tranonkala drc.ushahidi.com raha ny faritra manga kosa indray maneho ny toerana fitrandrahana coltan
Tsy any amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo ihany akory no trandrahana ny coltan, na dia izy aza no anisan'ireo firenena tena mpamokatra azy io betsaka indrindra. Manome ohatra vitsivitsy i Jonathan Gosier, momba reo fepetra noraisin'ireo orinasa mampiasa ny coltan any anatin'ny vokatra avoakany mba hiantohana fa tsy manampy amin'ny famatsiana ady mitampiadiana izy ireny:
Ny hafa mihevitra fa na misy fifamatorany aza ny ady mitampiadiana sy ny akora mineraly, mitanila ihany ny tetika sy fiketrehana mba hilazàna ireo akora mineraly ho hany loharanon'ny fifandonana ao Kongo. Izany no fomba fijery azo renesina ao anatin'ity lahatsary manaraka ity, nomena lohateny hoe Anontanio an'ilay Afrikàna: Kambale Musavuli, avy amin'ny fikambanana Ireo Naman'i Kongo:
Inona no TENA azo atao marina manodidina ny coltan ? Amin'izao fotoana izao, toa mahazo vahana ireo fanentanana natao mba hampahafantarana ireo mpamokatra singa elektronika ho an'ny daholobe, sy angatahana an-dry zareo hiantoka ny tsy hahalasa ny coltan novidiany ho famatsiana fifandonana mitampiadiana. Ilaina ihany koa ny mitandrina fatratra mba tsy hiverenan'ny tantara. Amin'izao fotona izao, lasa manandanja kokoa sy manokana satria ao Kolombia sy Venezoelà, firenena mpiray vodirindrina ary manàna tantara manahirana iraisany, sy filoha mpifahavalo, dia tsikaritra tsy ela akory izao ny fisian'ny coltan, ary dia any amin’ireo faritry ny sisintany iraisana mihitsy no misy azy.